अब भूगोलको दृष्टिबाट पनि समावेशिता लागू हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट - Narayanionline.com
सुदूरपश्चिम, असोज १-
नेपालको संविधानबमोजिम गरिएको राज्यको पुनःसंरचनासँंगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा छ । तीन तहका सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएका आआफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्दै शासन प्रशासन चलाइरहेका छन् ।
संविधानबमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जाँदा राज्य व्यवस्था सञ्चालनको अधिकार सिंहदरबारमा सीमित नराखी प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि लैजानुलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौंँ संविधानका रुपमा विसं२०७२मा लागू भएको नेपालको संविधानलाई समानुपातिक, समावेशी, लोकतान्त्रिक र उत्कृष्ट संविधानका रुपमा लिइन्छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा नै सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण पे्रस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई संविधानले आत्मसात् गरेको छ ।
संविधान लागू भएको दिन असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउने तयारी भइरहँदा प्रदेशस्तरमा संविधान कार्यान्वयनलगायत विषयमा रासस सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख सिद्धराज भट्ट र कैलाली समाचारदाता तिलकराज ओझाले प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग बुधबार गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
राससः राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा गएको चार वर्ष पुग्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँले के पाउनुभयो ? सङ्घीय प्रणाली व्यवहारतः लागू भएको ठान्नुहुन्छ ?
मुख्यमन्त्रीः संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानको उपलब्धि भनेको देशमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक व्यवस्था, तीन तहका सरकार गठन र विश्वमा कतै नभएको स्थानीय तहको शक्तिशाली सरकार छ । नेपाली जनताले लामो समयदेखि गरेको सङ्घर्ष र बलिदानको ठूलो उपलब्धि यही नै हो ।
राससः संविधानबमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो अवसर यहाँले पाउनुभयो । संविधानअनुसारको अधिकार उपयोग गर्ने क्रममा प्रदेशस्तरमा के कस्ता समस्या अनुभव गर्नुभयो ?
मुख्यमन्त्रीः संविधान जारी भइसकेपछि यसको कार्यान्वयनमा जाने कुरा पहिलो अभ्यास हो । काम गर्ने दौरानमा नयाँ प्रक्रिया, विधि, र शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दा केही समस्या देखिनु अस्वाभाविक हैन ।
नेपालमा केन्द्रीय सरकार र स्थानीय निकायहरु पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा थिए । प्रदेशको संरचना नयाँ भएकाले आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, कानून निर्माणसँगसँगै अनुभवका कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छन् । यी कुरा सँगसँगै हामीले अढाइ वर्षमा आइपुग्दासम्म संविधानले दिएका साझा र एकल अधिकारका विषय लागू गर्दै जाँदा केही अप्ठ्यारो महसुस ग¥यौँ । शुरुआती चरणका यी अप््ठ्यारालाई स्वाभाविक रुपमा लिँदै शुरुको अवस्थामा जे कुरा थिएनन्, तिनलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउँदै गयौँ । समग्रमा सन्तुष्ट नै छाँैं ।
राससः प्रदेशले पाएको अधिकारबमोजिम हालसम्म के कति कानून, नियमावली निर्देशिका बन्न सके ? यिनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
राससः प्रदेशस्तरमा बजेट, स्रोतसाधन तथा कर्मचारी परिचालन, प्रदेश प्रहरी गठनलगायत विषयमा केन्द्रले अझै अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भन्ने प्रदेश सरकारहरुको गुनासो छ भन्ने सुनिन्छ । यस विषयमा केन्द्रले के गरिदिनुप¥यो ?
मुख्यमन्त्रीः संविधानले तीन वटै तहका सरकारका एकल अधिकार र साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । एकल अधिकारका कानूनको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । साझा अधिकारका सवाल जस्तो प्रदेश प्रहरी रहने र कर्मचारीका हकमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने भनिएको छ तर सङ्घीय सदनमा यी कानून बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ । यी कानून छिटो बन्न नसक्दा केही अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ ।
यस विषयमा मैले पटक पटक सार्वजनिक रुपमा भनिरहेको छु, अब आर्थिक रुपमा पनि समावेशिता लागू हुनुपर्छ । राजनीति, प्रशासन, सदनलगायतमा समावेशिताका कुरा गर्दा अब भूगोलको दृष्टिबाट पनि समावेशिता लागू हुनुपर्छ । जहाँ विकास भएको छैन, पछाडि परेको क्षेत्रलाई विकास भएको क्षेत्रसरह पु¥याउन क्षतिपूर्तिसहितको आर्थिक व्यवस्थापन गरेर विकासको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
राससः संविधानमा दलित, महिला, अपाङ्गता, सीमान्तकृत वर्गको अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ तर व्यवहारमा लागू नभएको भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ । यसमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ?
मुख्यमन्त्रीः विश्वकै उत्कृष्ट संविधानमध्येको नेपालको संविधानले शासन प्रणालीमा जनताको नजीकको सरकारलाई कति अधिकार दिएको छ भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । शासन व्यवस्थाको कुरा मात्र नभएर समावेशी, समानुपातिक पिछडिएको क्षेत्र, जाति, वर्ग, समुदायलाई समेट्ने भनिएको छ । मौलिक हकको व्यवस्था पनि पर्याप्त छ । संविधान भनेको सिद्धान्त भएकाले यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा नियतवश केही कुरा लागू नगरिएको स्थिति हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ ।
राससः संविधानबमोजिम स्थानीय, प्रदेश र सङ्घका साझा अधिकारका विषयमा बन्नुपर्ने कानून, नीतिहरु समयमै बन्न नसक्दा प्रदेशस्तरमा संविधान कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ । यहाँको अनुभव के छ ?
राससः अन्त्यमा संविधान दिवसका अवसरमा नेपाली जनता र खासगरी प्रदेशवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मुख्यमन्त्रीःसंविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्नका लागि जनअपेक्षाअनुसार सरकारहरु अघि बढ्नुपर्छ । संविधान र सङ्घीयताको विषयलाई लिएर केही भ्रम फैलाउने कुप्रचार भइरहेको भन्ने सुनिन थालेकाले आमजनता सचेत भई संविधानलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्ने र व्यवहार अनि कार्यशैली परिवर्तन गरेर हिँड्नु जरुरी छ ।
विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड—१९को सम्भावित जटिल अवस्थाबाट जनतालाई जोगाउन तीन वटै सरकार एकबद्ध भएर लड्नु जरुरी छ । यसका लागि जनता पनि सचेत हुनु जरुरी छ ।रासस
रंगशालामा महायज्ञः व्यवसायी गौलीद्धारा १ करोड १२ लाखको जग्गा दान
सर्प जोगाउन सक्रिय भरतपुरको सापकोटा परिवार
नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा घिमिरे